Guddi madaxweynaha diray oo loo diiday inay Kismaayo tagaan. "XOG" - Caasimada Online
Home Warar Guddi madaxweynaha diray oo loo diiday inay Kismaayo tagaan. “XOG”
Guddi madaxweynaha diray oo loo diiday inay Kismaayo tagaan. “XOG”
Gudd uu Madaxweynaha Soomaliya u magacaabay arrinka dhuxasha taalla magaaladda Kismaayo ay maanta ka baaqdeen safar ay ahayd inay ku tagaan magaalada Kismaayo.
Sababta baaqashada wafdigan ayaa lagu tilmaamay iyadoo maamulka magaalada Kismaayo ay sheegeen in aanay waxba ka ogayn imaanshaha wafdiga ee magaalada Kismaayo, oo aan lagala tashan markii hore ee la magacaabayey.
Wararka qaar ayaa sheegaya in guddiga ay ka heleen maamulka Kismaayo, wargelin ku saabsan inaysan magaalada iman karin, oo aanay kusoo dhoweyneyn.
Ilo xog-ogaal ah oo lagu kalsoonaan karo ayaa xaqiijiyay in uu jiro kala fogaansho ku saabsan arrinka dhuxusha Kismaayo taalla oo u dhaxaysa dowladda Soomaaliya iyo maamulka magaalada Kismaayo hadda taladiisa gacanta ku haya.
Maamulka ayaa doonaya in dowladda ay xayiraadda ka qaado dhuxusha, halka dowladda ay ku adkeysatay inaysan qaadi doonin.